Onye isi ala ọhụrụ nke Zambia, Hichilema, nwere mmasị na njem nlegharị anya: Kọmitii Njem Nleta Africa dị njikere itinye aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi ala ọhụrụ nke Zambia, Hichilema, nwere mmasị na njem nlegharị anya: Kọmitii Njem Nleta Africa dị njikere itinye aka
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia
Onye isi ala Zambia Hichilema
Mgbe ụwa na Afrịka na -ekwu maka Zambia ha na -ekwu maka njem nlegharị anya na ọla kọpa.
Taa Hakainde Hichilema ka akwadoro ịbụ onye isi Zambia - na njem a Zambia meriri.
Ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka hụrụ nke a wee kweta ngwa ngwa.
3 ụbọchị gara aga eTurboNews buru amụma Hakainde Hichilema ịghọ onye isi ala Zambia. A kwadoro nke a ugbu a n'ihu ọha.
Kọmishọna nturu ugo nyere Hichilema 2,810,777 cotes megide onye mmegide ya Lungu onye nwetara 1,814,201- na ihe niile ma otu otu n'ime mpaghara 156 gụrụ. Ya mere, onye isi oche kọmishọna ahụ Esau Chuly kwupụtara Hichilema ka ọ bụrụ onye isi ala ọhụrụ nke Republic of Zambia
Otu n'ime ndị ọrụ mba ụwa mbụ kelere Onye isi ala Hichilema bụ onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Africa Cuthbert Ncube. Ọ maara uru njem nlegharị anya pụtara nye onye isi ala Hichilema a họpụtara ọhụrụ
Onyeisiala Zambia a họpụtara ọhụrụ bụkwa onye njem. Otu afọ gara aga, ọ na -ekwu na Facebook ya banyere ọtụtụ ebe nlegharị anya Zambia gụnyere Victoria Falls, Lumangwe, na nsụda mmiri ndị ọzọ mara mma na Northern Circut, na -echefughị ​​Ntumbachushi, Kamabo na Kudalila.
Ọ gara n'ihu na -ekwu maka mbugharị anụ kacha ibu n'ụwa nke enwere ike ịhụ na Zambia. Ihe osise okwute prehistoric na eserese ọgba n'ọtụtụ mpaghara anyị na Nachikufu ama ama na Muchinga.
Ọhịa Chirundu Fossil malitere laa nde afọ 150 gara aga, bụ ebe Zambezi dị na Mwinlunga, ụdị nnụnụ 750, na ọtụtụ anụ ọhịa ndị ọzọ.
Onye isi ala ọhụrụ ahụ kwuru na ndepụta ebe nlegharị anya enweghị njedebe. Ọ na -akọwa na Zambia na -adọta ndị njem nlegharị anya 900,000 kwa afọ maka naanị Victoria Falls.
O kwuru na anyị etinyeghị njem nlegharị anya n'elu ihe nkwado, mana anyị kwesịrị ime ya ugbu a. Mgbe o kwuru nke a, ọ bụ tupu COVID. Atụmatụ ya bụ ịbawanye ndị njem nlegharị anya na nde 2.5 nwere ikike ị nweta ego ruru ijeri dọla 1.9. Ozugbo ụwa a nwetara COVID-19 n'azụ onye isi ala ọhụrụ a nwere ike ịga n'ihu na atụmatụ a dịka onye ndu Zambia.
Ịnụ nke a, ọ bụghị ihe ijuanya na otu n'ime ndị mbụ kelere onye isi oche a họpụtara bụ Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB)
Kọmitii njem nlegharị anya nke Afrịka na -ekele Onye isi ala ya Hakainde S Hichilema maka ịbụ onye a họpụtara ka ọ bụrụ onye isi 7th nke Republic of Zambia.
Anyị na -ahụ n'anya ma na -asọpụrụ mmekọrịta chiri anya anyị na ọla a nke Africa n'ime usoro njem.
Zambia bụ onye kacha emepụta ọla kọpa n'ụwa na otu n'ime ihe ijuanya nke ụwa bụ ebe nlegharị anya na Zambia, The Mosi-wa-Tunya.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche ATB
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) ga -akwado ma mechie mmekọrịta ya na nnukwu mba a ka anyị na -atụgharịgharị ma degharịa mpaghara Afrịka ka ọ bụrụ ebe a ga -ahọrọ na Africa na ụwa.
Victoria Falls bụ nnukwu mkpuchi mmiri na -ada ada nke dị n'ụwa ma bụrụkwa ihe dị mkpa maka ụwa maka ọmarịcha atụmatụ ala ya na geomorphological nwere echiche na -akpali akpali na nhazi ala na -arụ ọrụ yana ịma mma pụtara ìhè nke Falls, fesaa igwe na egwurugwu.
Ekele m onye isi ala m. Enwere m olile anya na mgbe a na -a swornụ gị iyi, ị ga -ebute ụzọ n'ịkewapụta ike. Karịa ihe ọ bụla, Zambia chọrọ nrube isi nke gafee usoro ọchịchị na naanị ụlọ ikpe nwere onwe ga -ekwe nkwa nke ahụ. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ozi ezigara na mgbasa ozi mmekọrịta dịka Twitter. Zikomo Kwambili biputere ozi a.
Ozi ọzọ ezitere kwuru, sị:
Ekele Onye isi ala Hichilema na ndị Zambia ndị tozuru oke gafere ókèala agbụrụ na -egosi Zambia ka bụkwa otu mba
Nke ahụ ga -eme nke ugboro atọ nke ike ahụ na -agbanwe n'udo site na otu na -achị achị gaa na mmegide kemgbe mba ndịda ndịda Afrịka nwere onwe ya n'aka Britain na 1964.
Gburugburu Zambia, ememme malitere n'okporo ụzọ ka ndị na -akwado Hichilema yi uwe na -acha ọbara ọbara na edo edo nke United Party for National Development (UPND) na -agba egwu na -abụ abụ, ebe ndị ọkwọ ụgbọala na -afụ opi ha.
Hichilema, 59, onye bụbu onye isi na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịza ajụjụ tupu ọ banye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na -eche ọrụ ugbu a ịnwa ịtụte akụnụba Zambia. Enweela akụ na ụba ntakịrị ntakịrị site na ọnụ ahịa ọla kọpa dị mma karịa - ugbu a na -agbago elu elu afọ iri, nke ebuli ụgbọ ala eletrik na -ebugharị ya.
N'afọ gara aga, Zambia, nke abụọ kachasị na-egwu ọla kọpa n'Africa, rụpụtara ihe ndekọ.
Lungu, 64, ekwetabeghị. O gosila na ọ nwere ike ịgbagha nsonaazụ ya, nke ga -esi ike, ma e wezụga oke ya.